बाख्रा Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
पत्याउनु हुन्छ ??? गुगलको केन्द्रिय कार्यालयमा २०० बाख्रा काम गर्छन् ….!!!
[wp_ad_camp_1] अमेरीका । गुगलको केद्रिय कार्यालयमा २०० बाख्रा काम गर्छन । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर सत्य हो। यि बाख्राहरु लाई तलब दिएर राखिएको हो। तर यि बाख्रा सफ्टवेयर सम्बन्धि नभई केहि अरु नै...
बाख्राले जन्मायो ८ खुट्टे पाठो, यो कुनै फोटोसप ट्रिकको उपज हैन् !!!
[wp_ad_camp_2] तस्वीरमा तपाईले देखेको दृष्य कुनै फोटोसप ट्रिकको उपज हैन् । यसै साता क्रोयसियामा एउटा बाख्रोले ८ वटा खुट्टा भएको अनौठो बच्चा जन्मायो । जोरान पापारिकको पालेको बाख्रोले यस्तो अनौठो पाठो जन्माएपछि उनी छक्क...
घांस होइन कुखुराका चल्ला खाने बाख्रो
[wp_ad_camp_5] बाख्राले के खान्छ ? घाँसपात, अन्न आदि । बाख्रा शाकाहारी हो त्यसैले यसले मासु खाँदैन । तर यो दुनियाका सबै बाख्राले घाँसपात मात्र नखाँदा रहेछन् । भारतमा एउटा यस्तो बाख्रो छ जसले घाँसपात होइन...